Tag Archives: Xarakatul Shabaab
GABAY:- CEELBUUR & Abwaan Yuusuf Dhageey “Kaafir lama Ciseeye ALAA laga cabsoodaahe”.
Posted on June 21, 2014 by Voice Of Somalia Standard
26,March,2014 ayay ciidamada Xabashida Itoobiya duullaan gumeysi ku qabsadeen magaalada qadiimiga ah ee Ceelbuur oo dhacda gobolka Galguduud bartamaha dalka Soomaaliya.
Reer Ceelbuur qabsashada magaaladooda filanwaa kuma aheyn oo 20 maalmood ka hor ayay ogaayeen dhaq dhaqaaqa duullaanka Xabashida wayna u diyaar garoobeen.
Inkastoo Ceelbuur ay tahay magaalo Facweyn hadane qabsashadeeda Xabashida iyo xaabadeeda waxba uma faa’iideyn aan ka aheyn dhib iyo dhiigbax joogta ah,gaadiid dagaal oo burburay,saraakiil iyo askar ladilay , fuuqbax iyo saad xumo joogta ah.
Waa Sidee Xaaladda Ceelbuur:Dhammaan shacabkii ku noolaa magaalada ayaa isaga baxay waxayna u guureen dhanka degmooyinka iyo deegaanada kale ee Galguduud ee aan weli galin gacanta Xabashida ee xorta ah.
Dadka soomaalida ah ee Ceelbuur ku nool waa 5 qof oo ka shaqeeya shirkadaha isgaarsiinta ,kumanaan katirsan ciidamada Itoobiya ayaa deggan waddooyinka degmada soo gala waxayna magaaladu u egtahay bahala galeen haawanaysa waxa kaliya ee waddooyinka Ceelbuur lagu arkayo waa xayawaanada kala ah dameeraha iyo Mukulaalaha.
Siyaasadda faarujinta magaalooyinka iyo go’doominta:Dhammaan magaalooyinka ay soo galeen cadawga Itoobiya iyo Afrikaanta kale ayay shacabka soomaalida isaga qaxeen sababta ay u qaxayaan ayaa ah baqdin ay ka baqayaan in Itoobiyaanku dilaan ama ay diinkooda ka ka fitneeyaan.
Ceelbuur waxba sooma galaan waxna kama baxaan aan ka aheyn gaari isbuuc walba fuusta shidaala ugeeya shirkadaha isgaarsiinta,ciidamada Itoobiya dhibaata xooggan ayay ku qabaan joogista magaalada marka lagasoo tago dagaalka ay shabaabul Mujaahidiin kala kulmayaan.
#Kaalinta Qabaa’illada:Beelaha Murusade iyo Duduble ayaa kaalin weyn ka qaadanaya dagaalka iska caabinta ah ee xabashida Itoobiya lagula jiro.
MUUQAALO & MAQAL:-Maamulka Islaamiga ah Shabeelaha Hoose oo soo Bandhigay Dad Cudurada Dhimirka qabay oo Laga Daweeyay
Posted on May 7, 2014 by Voice Of Somalia Standard
Munaasabad Balaaran oo lagu soo bandhigayay dad qabay Cudurka Dhimirka oo Mujaahidiinta Alshabaab daweynayeen Muddo 8 bil ah ayaa ka dhacday Degmada Baraawe ee Shabeelaha Hoose.
Maamulka islaamiga ah ee Shabeelaha Hoose ayaa xareeyay dadka qaba Cudurka Dhimirka ee ku dhibaateysnaa degmooyinka Buula mareer,Qoryooley iyo Baraawe.
Sadax qof oo kamid ah bukaanada ayaa xaaladooda caafimaad lala tacaalay kuwaasi oo haatan la sheegay in muddo kadib la fasaxayo iyagoo loo sameynayo shaqo abuuris.
Sheekh Cabdullaahi Raabi oo kamid ah culimada diinta islaamka ayaa hadal ka jeediyay Munaasabada.
Dhagayso Kalimada Sheekh Cabdullaahi Raabi
Sidoo kale goobta Munaasabada waxaynu ku wareysanay qaar kamid ah bukaanada cudurka dhimirka laga daweeyay.
Dhagayso Bukaanada Laga daweeyay Cudurka Dhimirka.
Bukaanada Wali Xanuunka Dhimirka uu Hayo
Sadexda Ruux oo Caafimaadkoodu Hagaagay